ဂျပန်၏ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာရင်း - ပန်းချီကားများ (အခိတ) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျပန်၏ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာရင်း - ပန်းချီကားများ (အခိတ)
ဤစာရင်းသည် အခိတခရိုင်အတွက် ပန်းချီကား(絵画 kaiga?) ကတ်တလောက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု ပစ္စည်းများ စာရင်း ဖြစ်သည်။
၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၅ ထိ၊ နိုင်ငံတော်အဆင့် အဖိုးထိုက်သော အရေးကြီး ယဉ်ကျေးမှု အပိုင် ငါးမျိုး ဖြစ်သည်။ 
ထင်းရှူးတပင်ပေါ်က ညှို့ငင်နေသော ငှက်၊ ပိုးသားပေါ် ဆေးခြယ်၊ ဆတကဲ့ ရှောဇန်း ဆွဲ။
kenpon chakushoku matsu ni karadori zu (Satake Shozan hitsu)
1748.1785 !၁၈ ရာစုနှောင်းပိုင်း ယိုတိုကဲ့ သီးသန့်
(အခိတမော်ဒန် အနုပညာပြတိုက်တွင် ထိန်းသိမ်းထား)
Akita ranga 39°17′32″N 140°32′51″E﻿ / ﻿39.2923054°N 140.54753148°E﻿ / 39.2923054; 140.54753148﻿ (Akita Museum of Modern Art) 
တောင်ပေါင်းတထောင်၊ မြစ်ပေါင်း တသောင်း၊ ပိုးသားပေါ် ဝတနဘဲ ခဇန်းက ရေးဆွဲထား။
kenpon chakushoku senzan bansui zu (Watanabe Kazan hitsu)
1841 !၁၈၄၁ အခိတ သီးသန့်  39°48′53″N 140°03′39″E﻿ / ﻿39.814824°N 140.060856°E﻿ / 39.814824; 140.060856﻿ (Katamukai, Kanaashikoizumi, Akita) 
Taizong of Tang, Flowers and Birds, colour on silk, by Odano Naotake
ထန်နိုင်ငံ၏ ထိုက်ကျုံး၊ ပန်းနှင့် ငှက်များ၊ အိုဒနို နာအိုတကဲက ပိုးသားပေါ် ရေးခြယ်ထား။
kenpon chakushoku Tō Taisō kachō zu (Odano Naotake hitsu)
1770.1779 !၁၇၇၀ ဆယ်စုနှစ် Yokote (ယိုတိုတဲ) Akita Prefecture
(အခိတမော်ဒန် အနုပညာ ပြတိုက်၌ ထိန်းသိမ်းထား)
three scrolls; Akita ranga ကားလိပ် သုံးခုရှိသည်။ ၁၂၂.၀ စင်တီမီတာ (၄.၀၀၃ ပေ) by ၄၄.၅ စင်တီမီတာ (၁.၄၆ ပေ) 39°17′32″N 140°32′51″E﻿ / ﻿39.2923054°N 140.54753148°E﻿ / 39.2923054; 140.54753148﻿ (Akita Museum of Modern Art) 
Taima Mandala, colour on silk
တိုက်မာ့ မဏ္ဍလ၊ ပိုးသားပေါ် ဆေးခြယ်ထား။
kenpon chakushoku Taima mandara zu
1185.1333 !Kamakura period Daisen (ဒိုင်းစင်း) ဂျောရင်း ဘုရားကျောင်း (浄蓮寺?) some flaking of the paint 39°24′24″N 140°28′56″E﻿ / ﻿39.406663°N 140.482253°E﻿ / 39.406663; 140.482253﻿ (Jōrenji) 
Shinobazu Pond, colour on silk, by Odano Naotake
ရှိနော့ဘဇု ကန်၊ အိုဒနို နာအိုတကဲက ပိုးသားပေါ် ရေးဆွဲထား။
kenpon chakushoku Shinobazu-no-ike zu (Odano Naotake hitsu)
1770.1779 !၁၇၇၀ ဆယ်စုနှစ် ယိုကိုတဲ အခိတခရိုင်
(အခိတ မော်ဒန် အနုပညာ ပြတိုက်၌ ထိန်းသိမ်းထား)
Akita ranga ၁၃၂.၅ စင်တီမီတာ (၄.၃၅ ပေ) by ၉၈.၅ စင်တီမီတာ (၃.၂၃ ပေ) 39°17′32″N 140°32′51″E﻿ / ﻿39.2923054°N 140.54753148°E﻿ / 39.2923054; 140.54753148﻿ (Akita Museum of Modern Art) 
ခရိုင်အဆင့် ယဉ်ကျေးမှု ပစ္စည်းများ[ပြင်ဆင်ရန်]
၁ မေ ၂၀၁၅ အထိ၊ ခရိုင်အဆင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပစ္စည်း ၃၀ ဖြစ်သည်။
ကလေး မုန်းဂျု၏ ပုံ
chigo Monju zō
1602.1674 !၁၇ ရာစု Nikaho
ကန်းမန်း ဘုရားကျောင်း (蚶満寺?) holdinganyoi (scepter); by Kanō Tan'yū 39°12′56″N 139°54′12″E﻿ / ﻿39.215597°N 139.903293°E﻿ / 39.215597; 139.903293﻿ (Kanmanji) for all refs see 
(ဖုဂျဲင် ဗောဓိသတ်ပုံ) 普賢菩薩像
Fugen Bosatsu zō
1602.1674 !၁၇ ရာစု Daisen (ဒိုင်းစင်း) သီးသန့် ခနိုးတန်းယူးက ရေးဆွဲထား၊ ကလေးမုန်းဂျုပုံနှင့် တဆက်တည်း ရေးဆွဲထားခဲ့သည်ဟု ထင်၊ ပန်းချီကားလိပ် ၃ ချပ် တစု ရှိခဲ့သော်လည်း အလယ်ပုံ ဖြစ်သည့် ရှခ ညောရိုင် ပုံသည် လက်ရှိ ဘယ်ရောက်နေမှန်း မသိရချေ။ ၁၂၀ စင်တီမီတာ (၃.၉ ပေ) by ၇၅ စင်တီမီတာ (၂.၄၆ ပေ) 39°28′02″N 140°28′14″E﻿ / ﻿39.467110°N 140.470505°E﻿ / 39.467110; 140.470505﻿ (Wakatake-chō, Daisen)
Portrait of Hakuun
Hakuun shōnin gazō
Misato (မိဆတို) ဟွန်းငခု ဘုရားကျောင်း (本覚寺?) 39°25′19″N 140°32′59″E﻿ / ﻿39.421981°N 140.549737°E﻿ / 39.421981; 140.549737﻿ (Hongakuji)
jūroku rakan zō
1603.1868 !အဲဒိုခေတ် Akita (အခိတ) တဲင်းတိုခု ဘုရားကျောင်း (天徳寺?) ပန်းချီကား ဆယ့်ခြောက်လိပ် ရှိ 39°44′19″N 140°07′13″E﻿ / ﻿39.738528°N 140.120208°E﻿ / 39.738528; 140.120208﻿ (Tentokuji)
Customs of Akita, colour on paper, emaki
အခိတရဲ့ ဓလေ့၊ စက္ကူပေါ် ‌ဆေးခြယ်၊ အဲမခိ
shihon chakushoku Akita fuzoku emaki
Akita (အခိတ) အခိတခရိုင် (အခိတ ခရိုင်ပြတိုက်တွင် ထိန်းသိမ်းထား)  ၁၄.၇ မီတာ (၄၈ ပေ) by ၃၈.၃ စင်တီမီတာ (၁.၂၆ ပေ) 39°49′02″N 140°03′58″E﻿ / ﻿39.817354°N 140.066210°E﻿ / 39.817354; 140.066210﻿ (Akita Prefectural Museum)
Senju Kannon, colour on silk
စင်းဂျု ကန်းနွန်း၊ ပိုးသားပေါ် ရေးဆွဲထား။
kenpon chakushoku Senju Kannon zō
Nikaho (နိခဟို) သီးသန့် 39°17′35″N 139°57′51″E﻿ / ﻿39.293180°N 139.964227°E﻿ / 39.293180; 139.964227﻿ (Shin-machi, Nikaho)
Kongō-Taizō Ryōkai mandara
1300.1333 circa !ခမခုရ ခေတ်ကုန်ပိုင်း Oga (အိုင) ချောရခု ဘုရားကျောင်း (長楽寺?) ကားချပ် ၂ လိပ်ရှိ၊ ပိုးသားပေါ် ရေးဆွဲထား။  39°52′00″N 139°45′06″E﻿ / ﻿39.866567°N 139.751801°E﻿ / 39.866567; 139.751801﻿ (Chōrakuji)
Chinese Peony inaFlower Basket, colour on silk, by Odano Naotake
ပန်းအိုးထဲက တရုတ်ပီအိုနီပန်း၊ ပိုးသားပေါ် ဆေးခြယ်ထား၊ အိုဒနို နအိုတကဲ
kenpon chakushoku shakuyaku hana kago zu Naotake hitsu
1770.1779 !၁၇၇၀ ဆယ်စုနှစ် Yokote (ယိုကိုတဲ) အခိတခရိုင်
(အခိတ မော်ဒန်အနုပညာ ပြတိုက်၌ ထိန်းသိမ်းထား)
Akita ranga ၉၄.၅ စင်တီမီတာ (၃.၁၀ ပေ) by ၂၁.၀ စင်တီမီတာ (၀.၆၈၉ ပေ) 39°17′32″N 140°32′51″E﻿ / ﻿39.2923054°N 140.54753148°E﻿ / 39.2923054; 140.54753148﻿ (Akita Museum of Modern Art)
Kisakata, colour on paper, byōbu
ခိစခတ၊ စက္ကူပေါ် ဆေးခြယ်ထား၊ ဗြောဘု
shihon chakushoku Kisakata zu byōbu
1747.1824 !အဲဒိုခေတ် Nikaho (နိခ‌ဟို) နိခဟိုမြို့၊
နိခဟိုမြို့ ခိစခတ သမိုင်းပြတိုက် (にかほ市象潟郷土資料館?) ၌ ထိန်းသိမ်းထား
the six-panel folding-screen by Nagamasa Eishō (牧野永昌?) (1747-1824) depicts Kisakata (象潟?) before the great 1804 earthquake that transformed the landscape; Matsuo Bashō visited in 1689 and celebrated Kisakata in Oku no Hosomichi; the area has been designatedaNatural Monument 39°12′06″N 139°54′26″E﻿ / ﻿39.201556°N 139.907112°E﻿ / 39.201556; 139.907112﻿ (Nikaho City Kisakata Historical Museum)
True Views and Colouring, colour on paper, by Hakuun
အမြင်မှန် ဆေးခြယ်၊ စက္ကူပေါ် ဟခုအွန်းက ရေးဆွဲ။
shihon chakushoku Hakuun hitsu shinkeijō oyobi saekata
1764.1825 !၁၈ ရာစုကုန် ၁၉ ရာစု အစောပိုင်း Misato (မိဆတို) သီးသန့်
(ဟွန်းငခု ဘုရားကျောင်း (本覚寺?) တွင် ထိန်းသိမ်းထား)
39°25′19″N 140°32′59″E﻿ / ﻿39.421981°N 140.549737°E﻿ / 39.421981; 140.549737﻿ (Hongakuji)
Amida Raigō, on silk
အမိဒ ရိုင်းငေါ၊ ပိုးသားပေါ်
kenpon Amida raigō zu
Ōdate (အိုးဒတဲ) သီးသန့် 40°13′46″N 140°34′47″E﻿ / ﻿40.229562°N 140.579810°E﻿ / 40.229562; 140.579810﻿ (Shimoōgita, Ōdate)
Akita Ranga, Peonies onaRock
အခိတ ရန်းင၊ ကျောက်တုံးပေါ်က ပီအိုနီပန်း
Akita ranga "iwa no botan zu"
1757.1830 !အဲဒိုခေတ် Daisen (ဒိုင်းစင်း) သီးသန့် တရှိရို တဒခုနိ (田代忠国?) (1757-1830) ရေးဆွဲ။  ၉၇ စင်တီမီတာ (၃.၁၈ ပေ) by ၂၈.၅ စင်တီမီတာ (၀.၉၄ ပေ) 39°27′51″N 140°28′45″E﻿ / ﻿39.464170°N 140.479120°E﻿ / 39.464170; 140.479120﻿ (Ōmagaritōri-machi, Daisen)
Hanshan and Shide, ink on paper
ဟန်းစန်းနှင့် ရှိဒဲ၊ စက္ကူပေါ် မှင်နှင့် ဆွဲ
shihon bokuga Kanzan Jittoku
Akita (အခိတ) ဒိုင်းဟိ ဘုရားကျောင်း (大悲寺?) ကားချပ် တစ်စုံ 39°42′46″N 140°06′38″E﻿ / ﻿39.712894°N 140.110477°E﻿ / 39.712894; 140.110477﻿ (Daihiji)
Sixteen Benevolent Deities, colour on silk
နတ်မြတ် ဆယ့်ခြောက်ပါး၊ ပိုးသားပေါ် ဆေးခြယ်။
kenpon chakushoku jūroku zenjin
Akita (အခိတ) ဒိုင်းဟိ ဘုရားကျောင်း (大悲寺?) 39°42′46″N 140°06′38″E﻿ / ﻿39.712894°N 140.110477°E﻿ / 39.712894; 140.110477﻿ (Daihiji)
Kōbō Daishi, colour on silk
ကိုးဘိုး ဒိုင်းရှိ၊ ပိုးသားပေါ် ဆေးခြယ်၊
kenpon chakushoku Kōbō Daishi zō
1300.1375 circa !ခမခုရ ခေတ် အကုန်/ မုရိုမချိ‌ ခေတ်အစောပိုင်း Oga (အိုင) ချောရခု ဘုရားကျောင်း (長楽寺?) holdingavajra and rosary 39°52′00″N 139°45′06″E﻿ / ﻿39.866567°N 139.751801°E﻿ / 39.866567; 139.751801﻿ (Chōrakuji)
Sketchbook of Odano Naotake
အိုဒနို နာအိုတကဲ၏ ပုံကြမ်းစာအုပ်
Odano Naotake hitsu shaseichō
1777 circa !၁၇၇၇ ခန့် Yokote (ယိုကိုတဲ) အခိတ ခရိုင်
စက္ကူပေါ် မှင်နှင့် ဆေးခြယ် ၄၂.၅ စင်တီမီတာ (၁.၃၉ ပေ) by ၂၈.၃ စင်တီမီတာ (၀.၉၃ ပေ) 39°17′32″N 140°32′51″E﻿ / ﻿39.2923054°N 140.54753148°E﻿ / 39.2923054; 140.54753148﻿ (Akita Museum of Modern Art)
Cranes, by Shen Nanpin
ဆဲင်း နန်းဖင်း ဆွဲသော ကြိုးကြာများ
tsuru no zu (Shen Nanpin hitsu)
1738 !၁၇၃၈ Yokote (ယိုကိုတဲ) အခိတခရိုင်
ကားလိပ် ၁ စုံ ၉၇.၂ စင်တီမီတာ (၃.၁၉ ပေ) by ၄၉.၆ စင်တီမီတာ (၁.၆၃ ပေ) 39°17′32″N 140°32′51″E﻿ / ﻿39.2923054°N 140.54753148°E﻿ / 39.2923054; 140.54753148﻿ (Akita Museum of Modern Art)
Shaka sanson zō
အခိတ တိုးဖုကု ဘုရားကျောင်း (当福寺?) 39°43′10″N 140°06′39″E﻿ / ﻿39.719352°N 140.110788°E﻿ / 39.719352; 140.110788﻿ (Tōfukuji)
Copy of Van Royen's Flowers and Birds, colour on paper, by Ishikawa Tairō and Ishikawa Mōkō
ဆရာတော် ရိုယင်း၏ ပန်းနှင့် ငှက်များ ကော်ပီ၊ စက္ကူပေါ် ဆေးခြယ်၊ အိရှိခဝ တိုင်း‌ရိုးနှင့် အိရှိခဝ မိုးကိုး တို့ ဆွဲ။
紙本着色ファン・ロイエン筆 花鳥図模写 石川大浪・孟高合筆
shihon chakushoku Fan Roien hitsu kachō zu mosha Ishikawa Tairō・Mōkō hitsu
1796 !၁၇၉၆ Yokote (ယိုကိုတဲ) အခိတ ခရိုင်
copy of W. Van Royen's painting of 1725 ၂၃၂.၈ စင်တီမီတာ (၇.၆၄ ပေ) by ၁၀၇.၀ စင်တီမီတာ (၃.၅၁၀ ပေ) 39°17′32″N 140°32′51″E﻿ / ﻿39.2923054°N 140.54753148°E﻿ / 39.2923054; 140.54753148﻿ (Akita Museum of Modern Art)
Nursing Tigress, by Hirafuku Suian
ကျားမကို မွေးခြင်း၊ ဟိရဖုကု စုအိအန်း ဆွဲ
Hirafuku Suian hitsu nyūko
1890 !၁၈၉၀ ယိုကိုတဲ အခိတ ခရိုင်
ပိုးသားပေါ် မှင်နှင့် ဆေးခြယ် ၁၅၉.၅ စင်တီမီတာ (၅.၂၃ ပေ) by ၈၂.၄ စင်တီမီတာ (၂.၇၀ ပေ) 39°17′32″N 140°32′51″E﻿ / ﻿39.2923054°N 140.54753148°E﻿ / 39.2923054; 140.54753148﻿ (Akita Museum of Modern Art)
High Mountains Clear Autumn, by Terasaki Kōgyō
‌ကြည်လင်ဆောင်းဦး၊ မြင့်မားတောင်ကုန်းများ၊ တဲရဆကိ ကိုးငျော ဆွဲ
Terasaki Kōgyō hitsu kōzan seishū
1914 !၁၉၁၄ ယိုကိုတဲ အခိတ ခရိုင်
ပိုးသားပေါ်၊ ခြောက်ခန်းခေါက်သည့် ကားလိပ်ပေါ် ‌ဆွဲ။ ၃၆၄.၂ စင်တီမီတာ (၁၁.၉၅ ပေ) by ၁၆၈.၂ စင်တီမီတာ (၅.၅၂ ပေ) 39°17′32″N 140°32′51″E﻿ / ﻿39.2923054°N 140.54753148°E﻿ / 39.2923054; 140.54753148﻿ (Akita Museum of Modern Art)
Haruyama, by Hirafuku Hyakusui
ဟရုယမ၊ ဟိရဖုကု ဟျခုစုအိ ဆွဲ။
Hirafuku Hyakusui hitsu Haruyama
1933 !၁၉၃၃ ယိုကိုတဲ အခိတ ခရိုင်
ပိုးသားပေါ် မှင်နှင့် ဆေးခြယ် ၁၀၄.၀ စင်တီမီတာ (၃.၄၁၂ ပေ) by ၉၁.၀ စင်တီမီတာ (၂.၉၈၆ ပေ) 39°17′32″N 140°32′51″E﻿ / ﻿39.2923054°N 140.54753148°E﻿ / 39.2923054; 140.54753148﻿ (Akita Museum of Modern Art)
Mount Fuji, by Odano Naotake
ဖူဂျီတောင်၊ အိုဒနို နာအိုတကဲ ဆွဲ။
Odano Naotake hitsu Fugaku zu
1770.1779 !၁၇၇၀ ဆယ်စုနှစ် ယိုကိုတဲ အခိတ ခရိုင်
ပိုးသားပေါ် ဆေးခြယ်။ ၇၇.၀ စင်တီမီတာ (၂.၅၂၆ ပေ) by ၄၃.၅ စင်တီမီတာ (၁.၄၃ ပေ) 39°17′32″N 140°32′51″E﻿ / ﻿39.2923054°N 140.54753148°E﻿ / 39.2923054; 140.54753148﻿ (Akita Museum of Modern Art)
Sketchbook of Satake Shozan
ဆတကဲ ရှောဇန်း၏ ပုံကြမ်း
Satake Shozan shaseichō
1748.1785 !၁၈ ရာစုနှောင်းပိုင်း အခိတ အခိတခရိုင်
(အခိတ စင်းရှူး အနုပညာ ပြတိုက်၌ ထိန်းသိမ်းထား)
သုံးတွဲ ရှိသည်။ ၃၄.၀ စင်တီမီတာ (၁၃.၄ လက်မ) by ၂၆.၃ စင်တီမီတာ (၁၀.၄ လက်မ) 39°43′02″N 140°07′28″E﻿ / ﻿39.717346°N 140.124575°E﻿ / 39.717346; 140.124575﻿ (Akita Senshū Museum of Art)
Scenery with Lake, by Satake Shozan
ရေကန်သာ၊ ဆတကဲ ရှောဇန်း ဆွဲ။
Satake Shozan hitsu gozan fūkei zu
၁၆.၀ စင်တီမီတာ (၆.၃ လက်မ) by ၂၆.၃ စင်တီမီတာ (၁၀.၄ လက်မ) 39°43′02″N 140°07′28″E﻿ / ﻿39.717346°N 140.124575°E﻿ / 39.717346; 140.124575﻿ (Akita Senshū Museum of Art)
Bamboo and Java Sparrows, by Satake Shozan
ဝါးနှင့် ဂျားဗားစာငှက်၊ ဆတကဲ ရှောဇန်း ဆွဲ။
Satake Shozan hitsu take ni bunchō zu
၁၃၆.၀ စင်တီမီတာ (၅၃.၅ လက်မ) by ၄၀.၀ စင်တီမီတာ (၁၅.၇ လက်မ) 39°43′02″N 140°07′28″E﻿ / ﻿39.717346°N 140.124575°E﻿ / 39.717346; 140.124575﻿ (Akita Senshū Museum of Art)
Irises andaKnife, by Satake Shozan
အိုင်းရစ်ပန်းနှင့် ဓားတချောင်း၊ ဆတကဲ ရှောဇန်း ဆွဲ။
Satake Shozan hitsu kakitsubata ni naifu zu
၁၁၂.၅ စင်တီမီတာ (၄၄.၃ လက်မ) by ၄၀.၀ စင်တီမီတာ (၁၅.၇ လက်မ) 39°43′02″N 140°07′28″E﻿ / ﻿39.717346°N 140.124575°E﻿ / 39.717346; 140.124575﻿ (Akita Senshū Museum of Art)
Pink Lotus, by Satake Shozan
ပန်းရောင်ကြာ၊ ဆတကဲ ရှောဇန်းဆွဲ။
Satake Shozan hitsu guren zu
၈၇.၀ စင်တီမီတာ (၃၄.၃ လက်မ) by ၃၀.၅ စင်တီမီတာ (၁၂.၀ လက်မ) 39°43′02″N 140°07′28″E﻿ / ﻿39.717346°N 140.124575°E﻿ / 39.717346; 140.124575﻿ (Akita Senshū Museum of Art)
Bamboo Grass and White Rabbit, by Odano Naotake
ဝါးမြက်နှင့် ယုန်ဖြူ၊ အိုဒနို နာအိုတကဲ ဆွဲ။
Odano Naotake hitsu sasa ni shiro usagi zu
1750.1780 !၁၈ ရာစုနှောင်းပိုင်း အခိတ အခိတခရိုင်
၁၀၀.၅ စင်တီမီတာ (၃၉.၆ လက်မ) by ၃၂.၅ စင်တီမီတာ (၁၂.၈ လက်မ) 39°43′02″N 140°07′28″E﻿ / ﻿39.717346°N 140.124575°E﻿ / 39.717346; 140.124575﻿ (Akita Senshū Museum of Art)
Children with Dog, by Odano Naotake
ခွေးလေးနှင့် ကလေးများ၊ အိုဒနို နာအိုတကဲ ဆွဲ။
Odano Naotake hitsu jidō aiken zu
၄၁.၅ စင်တီမီတာ (၁၆.၃ လက်မ) by ၆၄.၀ စင်တီမီတာ (၂၅.၂ လက်မ) 39°43′02″N 140°07′28″E﻿ / ﻿39.717346°N 140.124575°E﻿ / 39.717346; 140.124575﻿ (Akita Senshū Museum of Art)
↑ Pamphlet on Cultural Properties။ Agency for Cultural Affairs။ 22 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 国宝・重要文化財 (in Japanese)။ Agency for Cultural Affairs (1 September 2015)။ 22 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Database of National Cultural Properties: 国宝・重要文化財（美術品）(絵画 秋田県) (in Japanese)။ Agency for Cultural Affairs။ 22 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 絵画 (in Japanese)။ Akita Prefecture (1 April 2015)။ 22 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 絹本著色松に唐鳥図（佐竹曙山筆） (in Japanese)။ Akita Prefecture။ 16 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Akita ranga။ Japanese Architecture and Art Net Users System။ 16 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 田原市博物館：特別展示室・企画展示室1 (in Japanese)။ Tahara Museum။ 17 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 絹本著色唐太宗花鳥図〈小田野直武筆／〉 (in Japanese)။ Agency for Cultural Affairs။ 17 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 唐太宗･花鳥山水 (in Japanese)။ Akita Museum of Modern Art။ 19 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 絹本著色当麻曼荼羅図 (in Japanese)။ Daisen City။ 17 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 絹本著色不忍池図〈小田野直武筆／〉 (in Japanese)။ Agency for Cultural Affairs။ 16 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 不忍池図 (in Japanese)။ Akita Museum of Modern Art။ 16 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 都道府県別指定等文化財件数（都道府県分） (in Japanese)။ Agency for Cultural Affairs (1 May 2015)။ 22 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 稚児文珠像 (in Japanese)။ Nikaho City။ 17 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 普賢菩薩像 (in Japanese)။ Daisen City။ 17 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 秋田風俗絵巻 (in Japanese)။ Akita Museum of Modern Art။ 19 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 絹本着色、金剛・胎蔵両界曼荼羅 (in Japanese)။ Oga City။ 19 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 芍薬花蘢図 (in Japanese)။ Akita Museum of Modern Art။ 19 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 絹本着色象潟図屏風（六曲一双） (in Japanese)။ Nikaho City။ 19 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 象潟 (in Japanese)။ Agency for Cultural Affairs။ 19 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 秋田蘭画 岩に牡丹図 (in Japanese)။ Daisen City။ 19 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 絹本着色弘法大師像 (in Japanese)။ Oga City။ 19 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 写生帖 (in Japanese)။ Akita Museum of Modern Art။ 19 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 鶴 (in Japanese)။ Akita Museum of Modern Art။ 20 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 日本絵画のひみつ (in Japanese)။ Kobe City။ 17 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ファン・ロイエン筆 花鳥図模写 (in Japanese)။ Akita Museum of Modern Art။ 17 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျပန်၏_ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာရင်း_-_ပန်းချီကားများ_(အခိတ)&oldid=435049" မှ ရယူရန်
ဂျပန်ဘာသာ စကားလုံးများပါသော ဆောင်းပါးများ